We Fight We Win. -- " More than Media ": မီးဘေးဒုက္ခသည်များ ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်အားပေးကူညီ
မီးဘေးဒုက္ခသည်များ ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်အားပေးကူညီ
မီးဘေးဒုက္ခသည်များ ထားရှိရာ မဟာဝိဇယ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ယနေ့နေ့လည် ၁၁း၃၀ တွင်လာရောက်ခဲ့ မီးဘေးဒုက္ခသည်များ ထားရှိရာ မဟာဝိဇယ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယနေ့နေ့လည် ၁၁း၃၀ တွင်လာရောက်ခဲ့သည်။ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်သို့ မည်သည့်လိုအပ်ချက်
ရှိပါသလဲဟု လျှောက်ထားရာ ဆရာတော်က သင်္ကန်းတစ်စုံသာလိုသည်ဟု မိန့်သည့်အတွက် သင်္ကန်း
တစ်စုံလှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း၊ ဆရာတော်က မိန့်သည်။
ထို့နောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ မီးဘေးဒုက္ခသည်များကို လိုက်လံနှစ်သိမ့်၊ အားပေးပြီး၊ ၄င်းတို့အတွက် လိုအပ်ချက်များကိုို မေးမြန်းခဲ့သည်။ ဒုက္ခသည်များက ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများ လိုအပ်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောပြခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ထို့ကြောင့် မီးဘေးသင့်ပြည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်အရ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ လှူဒါန်းရန် စီစဉ်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ မီးဘေးသင့်ပြည်သူများကို လိုက်လံအားပေးပြီးနောက် ၁၂း ၁၅ မိနစ်တွင် ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသည်။
To all celebrities, i applaud your generousities but one thing i want you all to know is, most people know you all are celebrities you don't need to show-off with well-dressed like very bright expensive garments,ok? That sign show that you all are not really smart people,look at the Hollywood stars whenever or wherever they go to visit like this disaster shelter , they just ware like casual dress like tee shirt and regular jeans, that's it. That show you are as same as those people who are suffering from disaster. Majority of Burmese celebrities are deifnitely not good and smart enough.Let alone those "thar-kuu" like lwin moe,maung maung(zin yaw) and many others.